I-Web Content Scraper: Ingabe Yona Indlela Engcono Kakhulu Yokuthola Idatha KuWebhu? - Semalt unikeza impendulo
Ukuthola idatha kusuka kuwebhu akuyona umsebenzi olula ngaso sonke isikhathi. Cishe uzame konke ukuthola isayithi equkethe idatha oyifunayo kodwa ayikwazanga ukulanda noma ukukopisha nokunamathisela okuqukethwe kwayo. Nokho, ungayeki! Kunezindlela ezithuthukisiwe zokuthola idatha ngendlela efanelwe ukuqhutshwa okuqhubekayo:
Ungathola idatha kusuka kuma-AP-based APIs (ukufakwa kohlelo lokusebenza). Izinhlelo eziningi zewebhu njenge-Facebook ne-Twitter zinikeza ukuxhumana okuvumela ukufinyelela okulula kwedatha yabo. Kulula kakhulu ukuthola idatha yezohwebo kanye neyehulumeni usebenzisa izixhumanisi ezinjalo.
Ungakwazi futhi ukukhipha idatha kusuka kuma-PDF - boats market value. Noma kunjalo, kungenzeka ukuthi akulula ngoba i-PDF yifomethi efanelekayo yamaphrinta. Kunamathuba wokuthi ungalahlekelwa isakhiwo sedatha edingekayo uma ulanda kusuka ku-PDF.
Kunendlela ephakeme yokukhipha idatha yewebhu - ukukhipha idatha ngokusebenzisa iwebhusayithi okuqukethwe scraper .
Kungani Kufanele Usebenzise i-Website Content Scraper?
Ukucabangela isimo esishintshayo sezinto ezitholakalayo ku-intanethi kanye nokuyinkimbinkimbi kwamapulatifomu asekelwe kuwebhu, kunezizathu eziningi ezinhle zokuthi kungani kufanele ucabange ukusebenzisa i-website scraper ukuze uthole ulwazi oludingayo. Nansi ukubuka okufingqiwe kwalezi zizathu:
Ukuqhafaza isayithi ngaphandle kwe-hitch
Isilinganiso-ukukhawuleka kuyisici esidinga ukucabangela lapho ukhetha indlela yokuthola idatha kusuka enetheni. Ngokwenzayo, kusho ukubeka umkhawulo kunani lezikhathi isivakashi singakwazi ukufinyelela esakhiweni ngaphandle kokubhekwa njenge-DDoS (ukukhishwa kwenkonzo esatshalaliswe. ) ukuhlaselwa. Uma ufuna ukuthola okungcono kakhulu isipiliyoni sakho sokukhipha idatha, sebenzisa i-web content scraper efanelekile . Iningi lamasayithi alivikeli okuqukethwe kwabo kusuka ku-scrapers ukuze ukwazi ukuthola ulwazi oludingekayo ngaphandle kokukhishwa.
Hlala ungaziwa ngenkathi usebenzisa
Uma ufuna ukuthola idatha kusuka kuwebhu ngasese, ukususa iwebhu kuyindlela engcono kakhulu yokuhamba ngalokhu. I-web scraper yokuqukethwe ikuvumela ukuba wenze izicelo ezilula ze-HTTP ngaphandle kokubhalisa. Ngaphandle kwamakhukhi akho kanye nekheli le-IP, akukho lutho olungaholela ekuqondiseni isayithi kuwe.
I-Web scraping ikuthola idatha etholakalayo kalula
I-web scraping akuyona isayensi ye-rocket. Asikho isidingo sokuxhumana nanoma ubani enhlanganweni noma ulinde isayithi ukuvula i-API. Vele ufunde amanye amaphethini okufinyelela okuyisisekelo kanye nokuqukethwe kwakho kwewebhu kwe-scraper kuzokwenza wonke umsebenzi.
Ungasebenzisa ama-web scrapers ukuthola cishe zonke izinhlobo zedatha kusuka kunoma isiphi isayithi. Ngakho-ke, kuyindlela engcono kakhulu yokuthola idatha kusuka kuwebhu uma kuqhathaniswa namanye amasu okukhishwa kwedatha. Isikhathi esilandelayo ofuna ukuthola noma iyiphi idatha ngaphandle kwewebhu, sebenzisa okuqukethwe kwe-web scraper futhi umsebenzi wakho uyoba lula futhi unentshisekelo kunanini ngaphambili.